VaMphoko Voparura Chirongwa Chekupa Zvitupa Vakawirwa neDambudziko reGukurahundi
Chikunguru 05, 2017
Hurumende kuburikidza nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaPhelekezela Mphoko, vanovazve gurukota rinoona nezvekupodzwa kwemaronda nekuregererana, yaparura chirongwa chekubatsira vanhu vakarasikirwa nevabereki munguva yeGukurahundi nedzimwe nyaya dzezvematongerwo enyika kuti vawane magwaro ekuberekwa pamwe nezvitupa.
VaMphoko vakaparura chirongwa ichi paTshino Primary School kuTsolothso nemusi weChipiri uye vakatiwo chichabatsira vakarasikirwa nemagwaro nyika yose nekuda kwemafashamu emvura mugore rino.
Asi vanopikisa vanoti Zanu-PF yave kuda kuita izvi panguva ino nechinangwa chekuda kutsvaga kuvhoterwa nevanhu kuMatabeleland muna 2018
Ongororo dzakaitwa nemasangano akawanda kusanganisira UNICEF dzinoratidza kuti vana vakawanda muZimbabwe, kunyanya kuMatabeleland, havana magwaro ekuzvarwa.
Ongororo yeUnicef iyi yakaitwa kuburikidza neZimbabwe Demographic Health Survey yakaratidza pachena kuti vana makumi mashanu nemumwe kubva muzana vainge vasina magwaro ekuberekwa nezvikonzero zvakasiyana siyana.
Mukuru wedzidzo kuMatabeleland South, Amai Thumisang Tabela, vanotiwo vana makumu matatu kubva muzana mudunhu ravo havana magwaro ekuzvarwa.
Vachiparura chirongwa ichi VaMphoko vakatiwo hurumende ichanovaka matombo pane vanhu vakavigwa vakawanda munguva yeGukurahundi kuTsolotsho, Lupane, Matabeleland South neMidlands. Vakati vanhu vemunzvimbo idzi havanawo magwaro ekuratidza kuti hama dzavo dzakaurayiwa munguva yeGukurahundi uye zvinonetsa kuti vawane zvitupa.
Mauto eFifth Brigade anonzi akauaraya vanhu muMidland neMatabelaland kubva muna 1983 kusvika 1987 mushure mekunetsana kunotyisa pakati peZapu nehurumende yeZanu-PF.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato reNational People’s Party, VaSamuel Sipepa Nkomo, vanoti Zanu-PF iyo ine makore ichiramba kugadzirisa nyaya yeGukurahundi, yave kuda kubata vanhu kumeso.
Hurukuro naVaSamuel Sipepa Nkomo